शुक्रबारको राशीफल ? तपाईँको आज कत्तिको लाभदायी होला ? हेर्नुस् - Sacho Post
२०७७ आश्विन ९, शुक्रबार ०७:०० बजे
मेहनतले उपलब्धि दिलाउनेछ। भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम, दाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
आजको दिन खासै फलदायी रहेको देखिदैन । पढाई लेखाईमा राम्रो छैन । आफ्नै कमजोरीले पछि परिनेछ । घर परिवारमा आफन्तबीचमा सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । बोलिको गलत अर्थ लाग्नेछ । त्यसैले कम बोल्नुहोला । स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला
कामको अवसर प्राप्त भए पनि भेटघाटले अलमल्याउन सक्छ। प्रयत्न गर्दा व्यापार बढ्नुका साथै व्यवसायमा लाभ हुनेछ। भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछ । महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने समय छ ।
विभिन्न भौतिक तथा विलासी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन लोभ्याउन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा राम्रो नतिजा हात लाग्नेछ। समयमा काम बन्ने हुनाले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । व्यसायसँग सम्बद्ध रमाइलो यात्रा हुनेछ ।
प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ । बिवादित बिषयहरुको निर्णय तपाईकै पक्षमा आउनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा पनि राम्रो नतिजा हात लाग्नेछ । आफन्त तथा गुरुवर्गहरुबाट हौसला प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानी हुने योग छ ।
परिस्थिति सोचेजस्तो छैन । हरेक काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। पढाइलेखाइमा सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकिए पनि गुरुजनको सुझाव र सहयोग लाभदायी बन्नेछ। व्यापारमा फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने मिहिनेतले कार्य सम्पादन हुनेछ।
व्यापार व्यावसायमा लगानी गरे पनि सोचेजस्तो उपलब्धि हात पार्न कठिन छ । घर जग्गा तथा सवारी साधनको कारोबारबाट सन्तोषजनक आम्दानी गर्न सकिनेछ । महत्वांकाक्षी योजनाहरु गोप्य नै राख्दा राम्रो हुनेछ । काममा विभिन्न बाधा तथा अवरोधहरुको सामना गर्नुपर्नेछ ।
परिवार र शुभचिन्तकहरुको साथले सोचेको लाभ उठाउन सकिनेछ। कीर्तिमानी काम सम्पादन गर्दै नाम, दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि हट्नेछन्।
आफन्त तथा घर परिवारका सहयोग मिल्नेछ । अध्ययन अध्यापनमा राम्रो नतिजा हात पर्नेछ । बोलीको प्रभाव बढ्ने तथा कर्म क्षेत्रमा तपाईको कामको उच्च मुल्याङकन हुनेछ । अतिथिको रुपमा सत्कार पाईने योग रहेको छ ।
रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् भने पहिलेको सफलताले पनि थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। व्यापारमा राम्रो फाइदा हुनेछ। नयाँ साथीभाइ भेटिनेछन्। सुन्दर पहिरणमा ठाँटिएर व्यक्तित्व निर्खाने समय छ ।
महत्वाकांक्षी निर्णयहरु आजको दिन थाती राख्नुहोला । व्यापार व्यावसायमा घाटा लाग्ने योग रहेको छ । बैदेशिक क्षेत्र सँग सम्बन्धित व्यावसायमा लगानी बढाउदा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा समय दिन सकिने छैन । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । यात्रा कष्टपुर्ण हुन सक्छ त्यसैले टाढाको यात्रा नगरेकै राम्रो हुनेछ ।
आयस्रोत बढ्नेछ। अवसर मिले पनि तत्काल फाइदा लिँदा भविष्यमा नोक्सान हुने देखिन्छ। मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्, सजग रहनुहोला। प्रयत्न गर्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता नगर्नुहोला ।
नयाँ काम आरम्भ गर्ने समय छ । प्रशस्त आर्थिक लाभ लिने दिन हो । व्यापार व्यावसाय फस्टाउने र आर्थिक स्थिति मजबुत हुने समय छ । बिगतमा सुरु गरिएका कामबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । पैत्रिक धनको प्रयोग मार्फत मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ ।
आज असाेज ८ गते बिहीबार, कस्ताे छ आजकाे दिन हेर्नुहाेस् राशिफल